स्पेस एक्सको नयाँ पुस्ताको रकेट टेक्सासमा पड्कियो
उत्तर अमेरिका । एलेन मस्कको कम्पनी स्पेस एक्सले बनाउँदै गरेको नयाँ पुस्ताको रकेट इन्जिन परीक्षणका क्रममा विष्फोट भएको छ । गत आइतबार मर्लिन इन्जिन जसले फाल्कोन ९ रकेटलाई उडाउँछ, सो इन्जिन विष्फोट भएको हो । यद्यपि उक्त विष्फोटनमा कोही पनि घाइते नभएको कम्पनीले जनाएको छ । यसबारे कम्पनीले अनुसन्धान पनि सुरु गरिसकेको उल्लेख गरेको छ ।
कम्पनीले यसकै कारण कम्पनीको उद्देश्यप्राप्तिमा प्रभाव पर्न नहुने जनाउँदै आफ्नो कार्यक्षेत्रमा प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ । पड्किएको इन्जिन नयाँ र अहिलेसम्म नउडेको बताइएको छ । यद्यपि सोही इन्जिन आगामी वर्ष प्रक्षेपण गरिने रकेटमा जडान गरिनेवाला भने रहेको थियो ।
यो घटनापछि फाल्कन ९ मा प्रयोग हुने ब्लक ५ संस्करणका इन्जिनहरु अहिलेलाई कम्पनीले सस्पेण्ड (निलम्बन, रद्द) गरेको छ । सन् २०१५ मा स्पेस एक्सको फाल्कन ९ रकेट प्रक्षेपण गरेको केही मिनेटमै पड्किएको थियो । उक्त रकेट अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष स्टेसनमा कार्गो लैजान प्रक्षेपण गरिएको थियो ।
त्यतिबेला रकेटमा कोही पनि थिएनन् । यस्तै २०१६ को सेप्टेम्बरमा पनि फाल्कन ९ रकेट पड्किएको थियो । त्यतिबेला पनि कोही पनि घाइते वा हताहत भएका थिएनन् । यद्यपि कम्पनीले यो वर्षमात्रै १६ पटक सफलतापूर्वक रकेट प्रक्षेपण गरिसकेको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो दोब्बर प्रक्षेपण हो ।
असफल रकेट प्रक्षेपणका बीच दुई अन्तरिक्षयात्री बाँच्न सफल
काठमाडौं । दुई अन्तरिक्षयात्रीहरु ठूलो दुर्घटनाबाट बाँच्न सफल भएका छन् । बिहीबार मानवसहितको रकेट प्रक्षेपण असफल भए पनि अन्तरिक्षयात्रीहरु सकुशल अवतरित भएका हुन् । रुस र अमेरिकी दुई अन्तरिक्षयात्रीलाई अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष
अमेरिकाद्वारा विश्वकै सभैभन्दा शक्तिशाली रकेट प्रक्षेपण
वाशिंटन । अमेरिकाले विश्वकै सभैभन्दा शक्तिशाली रकेट प्रक्षेपण गरेको छ । अमेरिकाको फ्लोरिडामा रहेको केनेडी स्पेस सेन्टरमा रहेको स्पेस सेन्टरबाट बुधबार विश्वकै शक्तिशाली रकेट ‘फाल्कन हेभी’ प्रक्षेपण गरिएको छ । यसलाई अमेरिकी
लञ्चप्याडमा अहिलेसम्मकै गह्रौँ रकेट !
स्पेस एक्सको फाल्कोन हेभी रकेट सोमबार फ्लोरिडाको केप क्यानाभरलमा रहेको केन्नेडी स्पेस सेन्टरको ३९ए लञ्च प्याडमा । बुधबार यसको प्रक्षेपण गरिँदै छ । कम्पनीले पहिलोपटक नयाँ हेभि लिफ्ट अर्बिटल रकेट
जो विज्ञानमा विश्वासै गर्दैनन्, उनी आफैँले बनाएको रकेटमा आफैँ प्रक्षेपित हुँदै छन् !
उत्तर अमेरिका । एक जना स्वघोषित वैज्ञानिकले क्यालिफोर्नियाको एउटा घोष्ट टाउन भन्ने स्थानमा आफैँले बनाएको रकेटमा आफूलाई नै प्रक्षेपण गर्ने तयारी थालेका छन् । माइक हघ्स जो आफूलाई म्याड माइक